Ethiopia iyo Eritrea: Labadii nin ee bidaarta lahaa ee shanlada ku dagaalamay - Caasimada Online
Home Warar Ethiopia iyo Eritrea: Labadii nin ee bidaarta lahaa ee shanlada ku dagaalamay
Ethiopia iyo Eritrea: Labadii nin ee bidaarta lahaa ee shanlada ku dagaalamay
Dagaalka waxa uu biloowday 6-dii May, 1998-dii kadib markii la’isku qabtay cidda maamulaysa magaalada Badme oo ah magaalo saxaro ku taala oo aysan jirin wax qiimo ah oo muuqda oo ay leedahay.
Ma lahan kayd shidaal oo halkaas ku jira ama xitaa macdan, balse Itoobiya iyo Eritrea taas micno uma samaynayso, mid kastana waxa uu doonayaa in uu qaato magaaladan. Dadka xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa ku tilmaamay “labo nin oo bidaar leh oo shanlo ku dagaalamaysa”.
Waxa ujeedku ahaa in muranka lagu dhameeyo, balse markii guddigii uu go’aamiyay in magaalada Badme lagu wareejiyo Eritrea, Itoobiya waa ay diiday go’aankaas.
Eritrea dhankeeda waxa ay diiday in ay wax wadahadal dambe la gasho Itoobiya illaa ay ka fulinayso go’aankii ay guddiga gaareen.
Dhanka Itoobiya, waxa ay dowladda inta badan ka walwalsantahay degenaansho la’aanta siyaasadeed ee dalkaas in ka badan magaalada Badme.
Ra’isulwasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku baaqay in nabad lagu dhameeyo dhibaatada jirta , balse dowladda Eritrea ayaa diiday baaqaas.
“Nabadda waxa ay dan u tahay labada da, balse waa in lagu saleeyaa xushmadda loo hayo shuruucda caalamiga ah, kuwaas oo ay Itoobiya ku xad gudbayso” ayuu yiri wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebremeskel.